Dalida: Sababta heesaha u joojisay korsashada cunugga - WAA LACAG LA'AAN
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Dalida: Sababta muusiggu u bixiyay ilmo
Dalida: Sababta muusiggu u bixiyay ilmo
"Waxaan ku guulaystay noloshayda, laakiin miyaanan noloshayda ku guuleystey?"Dalida waxa uu lahaa xirfad nololeed oo farabadan oo ah muuqaalka Faransiiska. Run xaqiiqda ah, France 3 ayaa udub dhexaad u ah Jimcaha 12 July dukumiinti, Dalida, haweeneyda oo ku riyootay meel kale. Iyadoo heeso caan ah, kaalin qurux badan oo shineemo ah, heesaha ayaa shaaciyay. In uu nolosha gaarka ah, in kastoo, farxad ma ahayn had iyo jeer had iyo jeer. Jacaylkiisa jacaylka ah waxay keentay niyadjab badaniyo waqti, iyada oo ka cabsanaysay in ay aragtay nafteeda u koraan. Xiddiga ayaa naftiisa dilay 2 ayaa laga yaabaa 1987, waxay ahayd kaliya 54 sano jir ah.
"Haddii Dalida si dhammaystiran u dhammaystirto xirfaddeeda, waxay ku dhawyihiin gebi ahaanba wuxuu seegay noloshiisa. Waxay ku timid da 'yar, ilmo aan jirin, oo mid ka mid ah uu ka warqabo kelinimadaas, fikradaha madow", Xusuusiyay Orlando, walaalkiis, wareysiiyay TV-ga.
Muusiggu weligiis ma ogi farxad hooyada. Waxay ku fikirtay in muddo ah oo ku saabsan qaadashada, ka hor inta aanad bixin. "Sababtoo ah safarkiisa, waxay ka cabsatay inay ka baxdo ilmahan oo uu u maleeyay inuusan ahayn inuu kor u qaado sidii uu u qalmay, nin joogta ah oo dhinaciisa ah, Orlando ayaa mar kale sharxay. Marwalba waxay marwalba ka dhigtaa xirfadeeda kahor inteeda kale. "
ARCHIVES - DALIDA TELEVISION "TILT MAGAZINE" IN 1967
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/dalida-pourquoi-la-chanteuse-a-renonce-a-adopter-un-enfant-996592
Pennsylvania GOP waxay ka fogaatay Trump's wax laga xishoodo
Meghan Markle wuxuu kufsaday by show a caan ah caanka Maraykanka ka hor ...